Si deg deg ah u rog habka Ha arbucin adigoo isticmaalaya Xarunta Xakamaynta [Pro tip] | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Si deg deg ah u rog qaabka Ha rabshayn adoo isticmaalaya Xarunta Xakamaynta [Pro tip]
Si deg deg ah u rog qaabka Ha rabshayn adoo isticmaalaya Xarunta Xakamaynta [Pro tip]
Waxaan rabnaa inaan kaa caawino sidii aad u maarayn lahayd Xarunta Xakamaynta, mid ka mid ah sifooyinka ugu awooda badan iyo kuwa aan laga faa'iidaysan ee aaladaha Apple. Cult of Mac's Control Center Pro Talooyin taxane ah ayaa ku tusi doona sida ugu badan ee aad uga faa'iidaysan karto sanduuqan waxtarka leh ee iPhone, iPad, Apple Watch iyo Mac.
Ma u socotaa kulan muhiim ah oo ma u baahan tahay iPhone-kaaga inuu aamuso? Ha ka werwerin inaad damiso qalabkaaga ama aad ku khalkhal galiso gudaha abka Settings; Ku beddel habka Ha rabshin adigoo hal taabo gudaha Xarunta Kontroolka.
Waxaan ku tusi doonaa sida loo isticmaalo dhammaan aaladaha Apple.
Waa fikrad aad u wanaagsan in aad jadwal u sameysato qaabka Ha dhibin wakhtiga hurdada, laakiin waxay u badan tahay inay jiri doonaan waqtiyo aad u baahan tahay inaad gacanta ku beddesho sifada si aad uga ilaaliso qalabkaagu inuu buuq sameeyo marka uu u baahan yahay inuu aamuso.
Waxaad tan ku samayn kartaa wakhti kasta gudaha gudaha Ha ku dhibin menu gudaha ah Settings app. Laakiin waxaa jira hab ka dhaqso badan, fudud oo ka shaqeeya iPhone, iPad, Apple Watch, iyo Mac.
U rog qaabka ha qasin gudaha Xarunta Kontroolka
Adiga oo isticmaalaya ku beddelka ha dhibin ee Xarunta Kontroolka waxaad awood u yeelan kartaa oo dami kartaa sifada adigoo kaliya taabo. Raac tillaabooyinkan:
Open Control Center adiga oo ka soo xaaqaya cidhifka sare ee midig ee shaashadda ee iPhone ama iPadka, adigoo kor u dulbanaya Apple Watch, ama adigoo gujinaya astaanta Xarunta Xakamaynta ee ku taal bar menu-ka ee Mac.
Guji ama ku dhufo Ha ku dhibin badhanka, kaas oo leh dayax, si aad isla markiiba u dhaqaajiso muuqaalka. Mar kale ku dhufo si aad u damiso
On Apple Watch iyo Mac, waxaa lagu siin doonaa ikhtiyaarka ah si ay u qeexaan inta aad rabto in aad awood Ha rabshoon habka loogu talagalay. Waxaad ka heli kartaa isla xulashooyin isku mid ah iPhone iyo iPad haddii aad taabato oo aad qabato sumadda Ha dhibin. Waxa kale oo xusid mudan in awood-siinta Ha ku qasbin Apple Watch sidoo kale waxay awood u siinaysaa muuqaalka iPhone si toos ah, iyo ku-xigeenka.
Taabo ama dhagsii beddelka u muuqda dayax
Ku-wareejinta gacanta ha ku qasin habkan waa habka ugu fudud ee gabi ahaanba loo aamusiyo qalabkaaga marka loo baahdo. Mana faragelin doonto jadwal kasta oo jira Ha rabsho oo aad dejisay.
Maskaxda ku hay, si kastaba ha ahaatee, in haddii aad gabto Ha carqaladayn marka uu caadi ahaan awood u yeelan doono jadwalkaaga (ama ku-xigeenka), si toos ah dib uma hawl-gali doono ilaa jadwalkaagu mar kale laado maalinta xigta.
Ka beddel dhawaaqa runta ah wakhti aan la joogin gudaha Xarunta Kontroolka [Pro tip]
Si fudud u maamul qalabka Bluetooth-ka gudaha Xarunta Xakamaynta [Pro tip]